YEYINTNGE(CANADA): Monday, June 13
အခုရက်ပိုင်းလေး က ငွေဈေး ရွှေဈေး က ၊ လူ တိုင်း နေ့ တိုင်း မေး နေ ရ တဲ့ ကိန်း ဆိုက်နေရ
ပေါ့ဗျာ ။ တနေ့ ထက် တနေ့ ၊ တ တိ ၊ တ တိ နဲ့ င အိ ကို ကျား ချီ သွား သလို ပါ။
ငွေ မာ ဈေး က လည်း အဆင်း ကြမ်း ၊ ရွှေ ဈေး က လဲ တက် ရိပ် က နေ ဇောက်ထိုး ကျ သွားနေ၊
ပြီး ခဲ့ တဲ့ လွှတ်တော်ကြီး စ ခါ စ က ၊ သမတ လခ သိန်း ၅ဝ ရမယ် ကြားခဲ့ ရ တဲ့ ၊
အခြေ အနေ တွေ နဲ့ ၊ ငွေဈေး ၊ ရွှေ ဈေး တွေ က ပြောင်း ပြန် ဖြစ် နေရ ပေါ့ ၊ ခင်ဗျာ ။
အဲဒီ အခါ တုံး က လူတွေ မှာ ကိုယ့် ရှိတဲ့ ဗမာငွေ ဖွတ် က လိ ၊ ဒင်္ဂါး လေး လုံး ပါး ပါး မှာ
စိုးရိမ်လွန်း လို့ တွေ့ ရာ ဒေါ်လာ ၊ တွေ့ ရာ ရွှေ လေး အပြေး ကလေး ဝယ် ကြ ရ သလို
အခု လို ဈေး တွေ ပြန် ထိုး ဆင်း ပြန်တော့ ၊ ကိုယ့် ပစ္စည်းလေး ၊ အောက် ဈေး အထိ မဆင်း ခင်
အပြေးလေး ပြန်ရောင်း ကြ ရ တော့ ၂ ခါ ပြန် ၊ လူ မော ငွေ မော ၊ ဟော ဟဲ ဆိုက် ရ ပြန် ပ ဗျာ
မိ အေး နှစ် ခါ နာ ၊ ကံ တွေ က လဲ ဆိုး ရ လွန်း ပေါ့ ဗျာ ။
နှစ်ခါ ကွဲ တဲ့ အသည်း ၊ မ နာ ဘဲ ရှိ ပ မ လား ဗျာ ။
ရွှေ ရောင်း တဲ့ ဆိုင် ၊ ဒေါ်လာ ရောင်း တဲ့ ဆိုင် တွေ က တော့ ၊ ဘယ် လို အခြေ အနေ ဖြစ် ဖြစ်
မျက်နှာထား က ခပ်တင်းတင်းပါဘဲ ၊ သမတ လခ သိန်း ၅ဝ ရ မယ် ကြား ကြ လို့ လူတွေ
အပြေး အလွှား ၊ ငွေမာ တွေ ဝယ်၊ ရွှေ တွေဝယ် ရ တုံး က လဲ ၊ ဝယ် ချင် တိုင်း ဝယ် မရ ပါဘူး၊
ရွှေ ရောင်း တဲ့ ဆိုင် ၊ ဒေါ်လာ ရောင်းတဲ့ ဆိုင် တွေ က မျက်နှာထား က ခပ်တင်းတင်း နဲ့
ခြောက်စား ဟောက်စား ရောင်း ကြ သလို ၊ အခု လို ဈေး ကျ လို့ လူ တွေ က ပြန်ရောင်း
ကြ ရ ပြန်တော့ လဲ ၊ ကိုယ့် ဆိုင် က ရောင်းထားတဲ့ ရွှေ ကို ၊ ကိုယ် ပြန် ဝယ် ရ တာ တောင်
မျက်နှာထား က ခပ်တင်းတင်း နဲ့ မဝယ်ချင် သလို ၊ အင်တင်တင် လုပ်ကြ ပြန် ပါ ရော ခင် ဗျာ ၊
ကျွန်တော် အရင် ရေး ပြ ခဲ့ သလို ၊ တိုင်းပြည် စီးပွားရေး ဂျင် ကြီး ကို ဘယ်သူ က ဘဲ
ဝင် လှည့် လှည့် ၊ ကျ သမျှ ပေါက်ကောင် ဝက် ဘဲ ဖြစ် လို့ ၊ အလှည့် တိုင်း ခံ နေ ရ တာ က ၊
သူ လို ငါ လို ၊ အများ ပြည်သူ ၊ သာမန် လူ တွေ ပါ ဘဲ ခင် ဗျာ။
ဒေါ်လာဈေး နဲ့ မြန်မာ ကျပ် ငွေ ဈေး ၊ တ ကယ်တော့ သီး ခြား စီ ပါ။ မှန် ပါ တယ်၊
ဒေါ်လာ ဆိုတာ အမေရိကန် ပိုက် ဆံ ၊ တ ကဘာ လုံး အများ သုံး ငွေ အဖြစ် လက်ခံ ပြီး
သုံးကြ ပါ တယ် ၊ သူ နဲ့ ချိတ် ဆက် ပြီး သုံး နေ တဲ့ နိုင်ငံ တကာ ငွေ ကြေး စနစ် က
အများကြီး ပါ ၊ ဒေါ်လာ က နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး ဈေး ကွက် မှာ လဲ အား နည်း ပါ တယ်။
ဒါ က လဲ ၊ အများ သိပြီး သား ၊ သူ့ အကြောင်း နဲ့ သူ ဖြစ် ရ တာ ပါ။
ရွှေ ဈေး လဲ အတူတူ ပါ ဘဲ ၊ ဒေါ်လာ အားပျော့ ရင် ရွှေဈေး က၊ ကဘာ မှာ တက် လာ ပါ တယ်
ဒါ့ အပြင် ကဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး ကပ်ဆိုက် လို့ နိုင်ငံ တချို့ မှာ ရွှေ တွေ ထုတ် ရောင်း ပြီး
ကျား ကန် ခဲ့ ရ လို့ ၊ ကဘာ့ ရွှေဈေး ပြောင်း တာ တွေ ရှိ ခဲ့ ပါ တယ်။
မြန်မာပြည် မှာ က ဒေါ်လာဈေး က ၊ ပုံ မှန် အားဖြင့် ဆပ်ပလိုင်း နှင့် ဒီမန်း သဘော ပါ ဘဲ
ငွေမာ အသုံးများပြီး ၊ ပြည်တွင်း ထဲ ငွေ မာ အဝင် နဲ ရင် ၊ ငွေ မာဈေး တက် ရ သလို
ငွေမာ အသုံး မရှိ ဘဲ ၊ ပြည်တွင်း ဈေး ကွက် ထဲ ငွေမာ အဝင် များ ရင် ၊ ငွေမာဈေး ကျ စမြဲပါ။
အခု အချိန် မှာ ၊ ကျောက် မျက် ပွဲ က ငွေမာတွေ ၊ ဓါတ်ငွေ့ ရောင်း ထား တဲ့ ငွေမာတွေ
အစိုးရ မှာ ဘီ လျံ ၅ဝ လောက် အရံ ငွေမာ ရှိ လာ တာတွေ ၊ တရုပ် ချေးငွေ အများကြီး
ဝင်လာ တာ တွေ ၊ နိုင်ငံခြား ပရောဂျက်တွေ တိုး ဝင်လာတာ တွေ ၊ နိုင်ငံ ခြား က ရွှေဗမာ
တွေ မိသားစု တွေ ထံ ပုံ မှန် ငွေ ပြန်၊ ပို့ တဲ့ အချိုး များ လာ တွေ က ၊ ငွေမာ အဝင် ဘက်
ကို ဒီ နှစ် အတွင်း သိသိ သာသာ အား ပြည့် လာ စေ ပါ တယ်။
ဗမာ ပိုက်ဆံ ရဲ့ တန် ဘိုး ဆို တာ က ၊ စဉ်းစား ကြည့် ပါ ခင် ဗျာ ၊ ပြည်တွင်း သုံး ငွေ
သက်သက် ပါ ၊ မြန်မာပြည် ထဲ မှာ က လွဲ လို့ ၊ ကဘာ ပေါ် မှာ ဘယ် နေ ရာ မှ သုံး လို့
မရ ပါ ဘူး ၊ ဘယ် နိုင်ငံ က မှ လည်း စိတ် မဝင်စား ပါဘူး
ဒါ ကြောင့် ဒေါ်လာ နဲ့ ဗမာငွေ အကြောင်း ကို စဉ်း စား ရင် ၊ အကြောင်း နှစ် ခု တွဲ
စဉ်း စား လို့ မသင့် ပါ ဘူး ၊ အ ကြောင်း တရား နှစ် ခု ၊ က သတ်သတ် စီ ပါ ခင် ဗျာ။
အပေါ်မှာ ပြော ခဲ့ သလို ၊ ဒေါ်လာ အကြောင်း ပြော ရင် ကဘာ ပေါ် မှာ ရှိ တဲ့ အကြောင်း
တရား တွေ နဲ့ စဉ်းစား ရ သလို ၊ ဗမာငွေ အကြောင်း စဉ်းစား ရင် တော့ ဗမာ ပြည်ထဲ က
အကြောင်း ကို ဘဲ စဉ်းစားရ မှာ ပါ။ ဗမာ ငွေ တန်ဘိုး အပြောင်း အလဲ က တကယ်တော့
မြန်မာ အစိုးရ နဲ့ ဘဲ ဆိုင်ပါ တယ် ၊ တရားဝင်ဈေး ၊ တဒေါ်လာ ၆ ကျပ်သာသာ ပါ။
၁၉၈၈ အရေးခင်း မဖြစ်ခင် က မှောင်ခိုဈေး ၂ဝ ကျပ် ကျော်ကျော် ဘဲ ရှိပါတယ်။
တိုင်းပြည်ပျက် မတတ် ၊ အရေးခင်း ကာလ ၊ ခေါင်း တွေ ဖြတ် နေကြ တဲ့ အချိန် မျိုး မှာတောင်
ပေါက်ဈေး က ၂၅ ကျပ်ပါ။အဲ ဒီ အခြေ အနေ က နေ ၊ တဖြေးဖြေး နဲ့ တဒေါ်လာ ၁၃ဝဝ လောက်
ထိ တက် ဈေးဖြစ် သွား တာ ကကဘာ နဲ့ ၊ ဘာ မှ မဆိုင်ပါဘူး ၊
ဗမာပြည် အတွင်း မှာ သာ ၊ သူ့ အကြောင်း နဲ့ သူဖြစ် သွား ခဲ့ တာ ပါ။
ဒေါ်လာ နဲ့ ကဘာ ဆို ရင် ၁၉ဂဂ အချိန် က နေ အခု ၂ဝ၁၁ အထိ
ပိန်မသာ ၊ လိမ် မသာ ပါဘဲ ၊ တရုတ် ယွမ်ငွေ နဲ့ ဆို ၆ ယွမ် ဝန်းကျင် ၊ ယိုးဒယား ဘတ် နဲ့ ဆို
၂၅ ဘတ် ၃ဝ ဘတ် ဝန်းကျင် ၊ ဂျပန် ယန်း နဲ့ ဆို ၈ဝ - ၁ဝဝ ဝန်း ကျင် ၊ အိန်ဒယိယ ရူပီး နဲ့
ဆို ၃၅ - ၄ဝ ရူပီး ဝန်းကျင် ၊ ပိန် မသာ ၊ လိန် မသာ ပါ။
အခု လို တရာဝင်ဈေး တဒေါ်လာ ၆ ကျပ် က နေ ၁၃ဝဝ ဖြစ် လိုက် ၊ အခု လို ၈ဝဝ ဝန်းကျင်
ဖြစ် လိုက် နဲ့ ဖြစ် ချင် တိုင်း ဖြစ် နေ တာ တွေ က ၊ ကဘာ နဲ့ ဘယ်လိုမှ ၊ ဘာ မှ မဆိုင် ပါဘူး၊
မြန်မာ ပြည် အတွင်း က အကြောင်း တရား တွေ နဲ့ ဘဲ ဆိုင် ပါ တယ်။ ဗမာ ပိုက်ဆံ က
ပြည်တွင်း မှာ ဘဲ အစိုးရ က ရိုက်နှိပ် သတ် မှတ် ထုတ်ဝေ တာပါ ၊ သူ့ အိုး သူ့ ဆန် ၊ နဲ့
အစိုးရ က ဝင် ငွေ ၊ ထွက် ငွေ မျှ တ အောင် သုံး နေ ရင် ၊ ဘယ် အချိန် ဘယ် ကာ လ ဘဲ
ဖြစ် ဖြစ် ၊ အပေါ် မှာ ရေး ထား တဲ့ ၊ နိုင်ငံတကာ ငွေ ၊ ဘတ် ၊ ယန်း ၊ ရူပီး ၊ ယွမ် ၊ တို့ လို
အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများ သုံးငွေ လို တန်ဘိုး ကွာဟမှု သိပ် မရှိ ဘဲ တည်တည် ငြိမ်ငြိမ် ဖြစ် ရ မှာပါ
အခု တော့ စိတ် ထင် တိုင်း ၊ ပိုက် ဆံ တွေ ထင် တိုင်း ရိုက် သုံး ခဲ့ တော့ ၊ အဲဒီ အချိန် တွေ မှာ
တဒေါ်လာ ၁၃ဝဝ လောက် အထိ ဖြစ်ခဲ့ရ ပါ တယ် ၊ တကယ် တော့ အဲ ဒီ အချိန် တွေ ဟာ
ဝမ်းသာ စရာ အခြေအနေ မဟုတ်ရ ပါ ဗျာ ၊ အခု အစိုးရ လက်ထက် မှာ လွှတ်တော် ဆို တာ
ပေါ်လာ ပါ တယ် ၊ ဥပဒေ ဆိုတာ ဘာ လဲ ဆို တာ ၊ အသက် နဲနဲ ဝင်လာပါ တယ်။
အရင် လို လက် လွတ် စပယ် ၊ အစား ၊ အထိမ်း အကွပ် လေး တခု တော့ ရှိ လာ ပါတယ်။
အထိမ်း အကွပ် က ၊ နဲ သည် ဖြစ် စေ ၊ များ သည် ဖြစ် စေ ၊ မ ရှိ တာ နဲ့ နှိုင်း စာ ရင်
အများ ကြီး တိုးတက် လာ တယ် ပြော ရ မှာ ပါ ခင် ဗျာ ၊ ဥ ပ ဒေ ဆို တာ ရှိ ရ ကောင်း မှန်း
သိလာ တာ ကို က ၊ ကောင်း ဘို့ ဖြစ် လာ ဘို့ ၊ ကနဦး ခြေ တလှမ်း ပါ။ အစိုးရ က ပြီး ခဲ့ တဲ့
၄ နှစ် လောက် က စ ပြီး ၊ ငွေ သုံး လျော့ ပါ တယ် ၊ ဝင် ငွေ ကို နည်း မျိုး စုံ နဲ့ ရ အောင်
ရှာ လာ ပါ တယ်။ အခု ဆို အစိုးရ က ငွေ သုံး တာ ကို လက် လွတ် စပယ် မလုပ် ရဲ တော့
ပါဘူး ၊ ရ ငွေ ၊ သုံး ငွေ ကို လွှတ် တော် မှာ ၊ ငွေကြေး စာရင်း ဇယား က တော့
အစီရင်ခံ ရှင်း ပြ ရ တော့ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။
ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီး မှာ လွှတ်တော်ပြီး က တဲ က ၊ အမှန် ရ ရ မဲ့ ငွေ ၊ အမှန် သုံး ရ မဲ့ ငွေ
သေချာ စာရင်းတွေ အရင် ပြန်စစ် နေ ပါတယ် ၊ ပြီးတော့ လက်ငင်း ချပေးထား တဲ့ အသုံးစာရိတ်
တွေ ၂၅% လောက် ဖြတ်ပြစ် ထား ပါ တယ်။ အထူး သဖြင့် အသစ် လုပ်မဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ပါ
ဆောက်လုပ် ဆဲ အဆောက်အဦတွေ ၂၅ % လောက် မှ မပြီး သေးရင် ဆက် မလုပ် တော့ ပါဘူး
ငွေကျပြီးသား ပေ မဲ့ ၊ လုပ်ငန်း မစ ရ သေး ရင် ၊ အားလုံး ကို ဆက် လုပ် ခွင့် မပြု တော့ ဘဲ
ဘတ်ဂျက်တွေ အများကြီး ၊ ပြန်သိမ်း ပစ် လိုက် ပါ တယ် ၊ မ သုံးတော့ ပါဘူး တဲ့ ခင်ဗျ ။
အခု ဆို ၊ အရင် အို ကေ နေ တဲ့ ၊ ကန် ထရိုက် တာ ကြီး တွေ ၊ ဒုတ် ခ နဲ့ လှ လှ တွေ့ ရ
ပါ တယ် ၊ လက် ရှိ လုပ် ငန်း ကို ရှေ့ လုပ် ငန်း က ရ မဲ့ ငွေ နဲ့ ချိန် ပြီး ၊ အလုပ် တွေ
အများကြီး၊ လက် ခံ ထား တဲ့ သူ တွေ ၊ ရှေ့ လုပ် ငန်း က ရ စရာ ငွေ မရှိ နိုင် တော့
တချို့ ဆို ၊ လုပ်သားခ ၊ နေ့ ချင်း ရှင်း ဘို့ တောင် ၊ အတော် ခက် လာ ကြ ပါ ဘီ။
အစိုးရ ဌာနတွေ ထဲ လဲ ပြသနာတွေ အများကြီး ပါ ၊ ရှေ့ လူ က ၊ နောက် ရ မဲ့ လုပ် ငန်း
တွေ ကို ဘတ်ဂျက် ကြို သုံး လေး တွေ နဲ့ ၊ လုပ် ငန်း စ သွားကြ တော့ ၊ နောက် လူ က ရ မဲ့
ဘတ်ဂျက် က ရှေ့လူ က ကြို သုံးသွား တာ အတွက် အကြွေးဆပ် ရ မလို ဖြစ် နေတာ အများ
ကြီး ပါ။ ဒီ ပြ သနာ တွေ က လဲ ၊ ဌာ န တိုင်း မှာ ၊ တိုး တိုး တမျိုး ၊ ကျယ် ကျယ် တမျိုး
ကြား နေ ကြ ရ ပါ တယ် ၊ တချို့ ဌာ န တွေ မှာ ရှေ့ လူ က ရှင်း မပေး နိုင် ရင် ၊
ရှေ့လူကြီးတွေ ကို ၊ အမှု ဖွင့် တရား စွဲ ကြ တော့ မဲ့ အခြေ အနေ တွေ တောင် ကြား ရ ပါ တယ်။
နောက် ကျင်းပ မဲ့ လွှတ်တော် အစည်းဝေး တွေ မှာ ၊ ဒီ ဟာတွေ ကို စာရင်းဇယား တိတိ
ကျကျ နဲ့ ဘယ် လို ရှင်း ကြ မလဲ ၊ ဘယ်လို ကိုင် တွယ် မလဲ ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်
တွေ ရဲ့ မေးခွန်းတွေ ကို ဘယ် လို ဖြေ မှာ လဲ ၊ ဘယ် လောက် ၊ ကလင်း ဖြစ် လာ မလဲ
ဘယ် လို ဂွဒ် လာ မလဲ ၊ စောင့် ကြ ကြ ရ ဦး မှာ ပါ ခင် ဗျာ ၊
အခု ဖြစ် နေ တဲ့ ဒေါ်လာ ဈေး ကျ တာ ၊ ရွှေ ဈေး ကျ တာ တွေ က ၊ အဲ ဒီ အကြောင်း
တရား တွေ က အဓိက အခြေ ခံ ပါ ၊ အစိုးရ က ဗမာငွေ အသုံး ကို တအား ကျပ် လိုက် တော့
လုပ် ငန်း ရှင်ကြီး တွေ လက် ထဲ ငွေသား ရှား လာ ပါ တယ်၊ အရင် လို ရှေ့ အလုပ် နဲ့
နောက် အလုပ် ၊ အစိုးရ ငွေ ကို ထင် သလို လှည့် သုံး ခွင့် မရှိ ကြ တော့ ၊ လက် ထဲ
ရှိ တဲ့ အလုပ် ပြီး ပြတ် အောင် ၊ ကိုယ့် ငွေ ကိုယ် ဘဲ ၊ တ ကယ်ထုတ် ၊ စိုက် ကြ ရ ပါ တယ်။
ဒီ တော့ ငွေ ပေါ်လေး ၊ လို လာ တဲ့ အတွက် ၊ လက် ထဲ ရှိ တာ အကုန် ရောင်း ရ ပါတယ်။
နောက် တခု က အများ သိကြ တဲ့ အတိုင်း ၊ တွက် ရေး စက်သူဌေး နဲ့ မတန် တဆ ဈေးတွေ နဲ့
မြေကွက် တွေ ၊ အဆောက် အဦ တွေ ၊ စက် ရုံ နေရာ တွေ ကို လော ဘ တကြီး ၊
လေလံဆွဲခဲ့ ကြသူ တွေ ၊ ကျပ်ငွေ ဘီလျံ ဆယ်ကြီး ဂဏန်း နဲ့ ငွေ အပြေ ကို ခု လ ပိုင်း
အတွင်း အကြေ ချေ ကြ ရ မှာ ပါ ။ လုပ်ငန်းကြီး တွေ အတွက် နူရာ ဝဲစွဲ တာ ပါ ဘဲ။
အများ စု က တော့ စဘော်ငွေ သိန်းရာ ဂဏန်းလောက် အဆုံး ခံ ကြ မဲ့ သူ တွေ များ ပါ တယ်
ဘယ် လို ဘဲ ဖြစ် ဖြစ် အခု ဖြစ် နေ တာ တွေ က ၊ လမ်း မှန် ဖြစ် ဘို့ နီး စပ် တယ် ဘဲ
ပြော ချင် ပါ တယ် ၊ မြန်မာပြည် မှာ က၊ ကိုယ့် ခွန် ကိုယ့် အား နဲ့ တရားနည်းလမ်း တကျ
သမာအာဇီဝ နဲ့ ကြိုးစား လို့ သူဌေးကြီး ဖြစ် လာ သူ ရှားပါ တယ် ၊ အစိုးရ နဲ့ နီးစပ် လို့
အခွင့်ထူး ခံ ပြီး ၊ ဖြတ်လမ်း က ၊ လက်တန်း ချမ်းသာလာသူ တွေ က ပို များ ပါ တယ်။
အခု လို ၊ လွှတ်တော် နဲ့ ဥပဒေ နဲ့ အထိမ်း အကွပ် လေး နဲနဲ ပါးပါး ရှိ လာ တာ ကို က
မရှိတာ နဲ့ စာရင် ဝမ်းသာ စရာပါ ။ ဥပဒေ ပိုပြီး အားကောင်း လာ မယ် ၊ အထိမ်း အကွပ် ပို
တိကျ မှန် ကန် လာ မယ် ဆိုရင်တော့ ၊ အတိုင်း ထက် အလွန် ပေါ့ ခင် ဗျာ။
အခု လို ဒေါ်လာ နဲ နှိုင်း စာ လို့ မြန်မာ ငွေ တန်ဘိုး တက် လာ ၊ ရွှေ ဈေး တွေ ကျ လာ တာ
က ၊ အစိုးရသစ် က စီ မံ ခန့် ခွဲ မှု တော် လို့ ၊ မြန်မာပြည် စီးပွားရေး ကောင်း လာ လို့
အမျိုးသား ထုတ်ကုန်တွေ တိုးမြင့်လာလို့ ၊ အိတ်စပို့ တွေ တအား များ လာ လို့
လူတွေ အလုပ်အကိုင် ကောင်းလာပြီး ၊ စား ဝတ် နေ ရေး ပြေ လည် လာ လို့
ဗမာ့ ငွေ တန်ဘိုး က တကယ် မာ လာ ပြီး ၊ တိုင်း ပြည် ကြီး က ချမ်းသာ လာ လို့ ၊
ဒီ အချက်တွေ ကြောင့် တော့ ၊ နဲ နဲ လေး မှ ၊ မ ဟုတ် ရ သေး ပါ ခင် ဗျာ။
ခေတ် အဆက်ဆက် ၊ ထင် ရာ လုပ် လာ တာ တွေ ကို ၊ ဆက် မလုပ် ဖြစ် တော့ ဘဲ ၊
ဘာ ဆက်လုပ် ရင် ကောင်း မလဲ ဆို ပြီး ၊ ခန လေး နဲ နဲ ရပ်ထား ပြီး ၊ ခန နား ကြည့် လိုက် တာ
မှာ ၊ အစိုးရ လဲ ဘာ ဆက် လုပ် ရ မှန်း မသိ ၊ ရေပေါ်ဆီ အခွင့်ထူး ခံ တွေ လဲ ၊ အရင် လို
အစား ရ မချောင် ဖြစ် နေ တုံး ၊ ပြည်တွင်း သုံး ငွေ တွေ ၊ ခန ၊ ရှား သွား လို့ ဖြစ် ရ တာပါ။
အစိုးရ မှာ နဲ နဲ လေး ၊ အထိမ်း အကွပ် ရှိ လာ ခဲ့ ရင် ၊ တိုင်း ပြည် စီးပွား ရေး မှာ
သိ သိ သာ သာ ၊ ထိရောက် သွား တာ ကို ၊ မြင် သာ လာ ပါ တယ်။
တကယ်တော့ လက်ရှိ အခြေအနေ က ငွေကြေးဈေးကွက် ကို အဓိက ဦးဆောင် နေ တာက
အစိုးရ ပါ။ သူ က လုပ်ငန်းတွေ ချ ပေး မှ ၊ လက် သင့် ရာ သူဌေးကြီးတွေ အသက်ရှူ ချောင်
လာ တာပါ။ ဝ မရှိ ဘဲ ဝိ လုပ်ပြီး ၊ အမ် အိုင် ဂျီ ဂျက်တွေ အတွက် ငွေ ချေ ရ တုံး က
ဦးတေဇ လေယဉ်ပျံ တွေ ဝယ် တုံး က ၊ ဟို သဌေးမင်း ပင်လယ်ကူး သင်္ဘော တွေ ဝယ် တုံးက
ဝါဇီ က အိုဘာတိုင် ဆင်းပြစ် လိုက် တာ တဒေါ်လာ ၁၃ဝဝ ကျော် ဖြစ် သွား ရော ပေါ့ ဗျာ၊
ဒီ လို ၊ ဒေါ်လာဈေး ကောင်း ခဲ့ တာ က ၊ တိုင်း ပြည် မှာ ဝမ်းသာ စရာ မဖြစ် ခဲ့ ပါ ဘူး ၊
အခု လဲ ဒေါ်လာဈေးကျ တာ ရွှေ ဈေး ကျ တာ ကို ဝမ်းနည်း စရာ လို့ မမြင် သင့်ပါဘူး
တော် ကြာ အစိုးရ အသစ် က ၊ ကက်ရှ် ဖ ၊ အင်ဂျက်ရှင်း ဆို ပြီး ၊ စီ မံ ကိန်း အသစ် တွေ
ကို ငွေ တွေ ဘုံး ဘော လ အော ချ ပေး လိုက် တာ တို့ ၊ စစ် သား တွေ ကို လခ တွေ
တပုံ ကြီး တိုး ပေး တာ တို့ လုပ် လိုက် ရင် ၊ ရွှေ ဈေး ၊ ဒေါ်လာ ဈေး တွေ ဝုန်း က နဲ
ပြန် တက် လာ မှာ ပါ၊ တော် ကြာ ဇင်ဘာဘွေ နိုင်ငံ ကိန်း ဆိုက် သွား လို့ ၊ အဲ သာ က မှ
တိုင်း ပြည် အတွက် တကယ် ဝမ်း နည်း စ ရာ ဖြစ် ရ မှာ ပါ။
အခု အစိုးရ က တော့ မြန်မာငွေ ကို ကျစ် လာစေ ချင်တဲ့ သဘော ရှိပါတယ်။
ပြီးခဲ့ တဲ့ လခ တွေ ထုတ်ပေးတုံး က ၂ဝဝ တန် အသစ်တွေ ၁ဝဝ တန် ၅ဝ တန် ၂ဝ တန်တွေ ကို
၁ဝ တန် အထိ ငွေစက်ကူ အသစ် တွေ တယောက် ကို ၁ သောင်းဘိုး လောက် ထည့်
ပေးတာတွေ့ ရ ပါ တယ် ၊ အကြော်သည် ၊ တို့ ဆိုက်ကား ဆရာ တို့ မှာ အမ်းစရာ
ပိုက်ဆံ ပေါလာတာ တွေ့ ရ ပါ တယ်။
အင်း ၊ အခုခေတ် ဆိုက်ကားဆရာ များ က လဲ ခေတ်မီပ ဗျာ ၊ ဆိုက်ကား နဲ့ အတူ
မော်တော်ဆိုင်ကယ် ပါ ရှိကြ တယ် ခင်ဗျ၊ ပါစင်ဂျာ မှာ အထုပ်အပိုး မပါဘူး ဆိုရင်
ဆိုင်ကယ်လေး နဲ့ လိုက် ပို့ ပြီး ဆိုက်ကားခ ဘဲ တောင်း သဗျ ၊ အဲသာက ပို ကိုက်တာကိုး
ဆိုင်ကယ် နဲ့ ၅ဝဝ ခရီး က ဆိုက်ကား နဲ့ ဆို ၁ဝဝဝ ဘိုးလောက် ရှိတာပါ။
အထုပ်အပိုးပါရင် တော့ ဆိုက်ကား နဲ့ နင်း ပို့ ပြီး ကုန် ခ ပါ ထည့်တောင်း ပါ တယ်။
ကျွန်တော် တို့ တိုင်းပြည် က လူ တွေ က လဲ ခေါက် ရိုး ကျိုး နေ ပါ တယ် ဗျာ။
ကိုယ့် ရှိ တဲ့ ဥစ္စာ ဓန ကို ပရိုဒတ်တစ်ဗ် ဖြစ် နိုင် မဲ့ ရင်း နှီး မြုပ် နှံ မှု ကို စိတ် မကူး နိုင်
ကြ ပါဘူး ၊ တခါ လာ လဲ ၊ ရှိ သ မျှ ငွေ နဲ့ ၊ မြတ် မယ် ထင် တာ ၊ ရ သလောက် လိုက် ဝယ်၊
ပြီး ရင် ဝယ် ထား သမျှ ၊ အ ကုန် ပြန် ရောင်း ၊ ရောင်း လို့ ရ သမျှ ၊ အ ကုန် ပြန် ဝယ်
နဲ့ ၊ ဒီ သံ သရာ မှာ ဘဲ ၊ ငွေ ပမ်း ၊ လူ ပမ်း ၊ လက် ပမ်း ကျ ကုန် ကြ ပါ ဘီ။
ရောင်းဝယ်ခဲ့ သ မျှ ၊ ဒေါ်လာ ဈေး ကွက် ၊ ရွှေ ဈေး ကွက် ၊ ကား ဈေး ကွက် ၊ အခု နှစ် ပိုင်း
က တော့ အကုန်လုံး ၊ အထက် လှန် ၊ အောက် လျှော နဲ့ မျော့ မျော့ ဘဲ ကျန် ပါ တော့ တယ်။
လောလောဆယ် က တော့ မြေ ဈေး ကွက် မှာ လူ တွေ ၊ တအုံး အုံး နဲ့ ပါ။
ဒါ က လဲ ပြီး ခဲ့ တဲ့ အစိုးရ မြေ လေ လံ က ဘဲ စ တာ ပါ ဘဲ ၊ မတန် တဆ ဈေး တွေ
လေ လံ ဈေး ပေး ထားကြ တော့ ၊ နီးစပ်ရာ မြေ ကွက် ဈေး တွေ ပါ ၊ လိုက် တက် ကုန် တာပါ။
အခု ဆို အသံကြား ဖား သေ ၊ ဈေး ကွက် မျိုး ဘဲ ရှိ ပါ တယ် ၊ လူ ၁ဝဝ မှာ တယောက်
လောက် က ၊ အရောင်း အဝယ် ဖြစ် လိုက် ၊ ကျန် တဲ့ ၉၉ ယောက် က လက် ခမောင်း တွေ ထ
ခတ်ပြီး ဈေး တွေ ပါးစပ် က လွှတ် ခေါ် ကုန် ကြ တာပါ။ အကုန် လုံး အရောင်း အဝယ် မဖြစ်
ပါဘူး ခင် ဗျာ ၊ အရောင်း အဝယ် ဖြစ် ခဲ့ တာ က လဲ ၊ တကယ် သုံး မဲ့ သူ က ဘဲ
အဝယ် ရှိ တာ ပါ ၊ ဟိုတယ် ဆောက် ချင် လို့ ၊ ဘဏ် ဆောက် ချင် လို့ ၊ ဆေးခန်း ဆောက်
ချင်လို့ ၊ ရှော့ပင်း မော်လ် ဆောက်ချင် လို့ စ သဖြင့် ၊ တကယ် သုံးမဲ့ သူ က ဘဲ ဝယ် တာပါ
အခုတော့ မြေဈေးကွက်ထဲ တိုင်း တပါးသား က ဝင်ရှုပ် တာ များ လာ တော့ ဈေးကွက် က
ကမောက်ကမဖြစ် လာ ပါ တယ်။ ဟို အရင် မော်လမြိုင် စက်မှုဇုန်မြေကွက်တွေ အတက်ကြမ်းခဲ့
တာလေး သတိရ လို့ ပါ။ ရန်ကုန်သား တွေ ဆင်းပြီး မြေဈေး အပေးကြမ်း လိုက်တာ ၊ ဘယ် တုံး
က မှ ရောင်း မထွက် တဲ့ မြေ ကွက် တွေ ဈေး တက် ကုန် ပါ တယ် ၊ အဲ ဒီ စက်မှု ဇုန်နား
လူ တွေ တရုံးရုံး နဲ့ ရောင်း ကြ ဝယ် ကြ ပေါ့ ဗျ၊ ခိုင် ခိုင် မာမာ စာရွက် စာတမ်း မပြော နဲ့
ဖိုတိုစတက် ဆွဲထားတဲ့ မြေပုံ စာရွက်လေး ကိုင် ထား တဲ့ လူ တွေ့ တောင် ၊ ဇွတ် အတင်း စရံ
လိုက် သတ် ရ တဲ့ အခြေ အနေ ဖြစ် လာ ပါ တယ်။
ဈေး ကွက် အမြင့် ဆုံး အချိန် ၊ ဈေး အဟော့ ဆုံး အချိန် လဲ ကျ ရော ၊ ရန် ကုန်သားတွေ
တယောက် မှ မ ရှိ တော့ ပါ ဘူး ၊ မြေကွက် တွေ ကို တက်ဈေးကြီး နဲ့ လက် ထဲ မှာ
အများကြီး မိ နေ သူ တွေ ကို ကြည့် လိုက် တော့ ၊ အကုန် လုံး မော်လမြိုင်သား တွေ ပါ ဘဲ။
ဒီ အချိန် မှာ တော့ ရန်ကုန်သားတွေ က ငွေ ထုပ် ပိုက် ပြီး ၊ အကုန် ပျောက် သွား ကြ ပါ ဘီ။
အခုလဲ ကြား နေ ရ တာ ၊ မြေ ၊ အ မြို ခံ နေ ရ တဲ့ သူ တွေ အတော် များ လာ ပါ တယ်။
လက် ထဲ ရှိ တဲ့ မြေ ကွက် က လဲ ရောင်း မထွက် ၊ မြတ် မယ် ထင် လို့ စရံ သတ် ထား တဲ့
မြေကွက် က လဲ လက် ထဲ အများကြီး ၊ အကြေ ခြေ ဘို့ ၊ က လဲ ချွေး ပြန် စ ရာ ပါ။
တရုပ်ကြီး တွေ မြေ ကွက် ဈေး မေး တာ ၊ အ သံ သိပ် မကြား ရ ရင် တော့ ဖြင့် ၊
သ တိ လေး တော့ ထား ကြ ပါ ခင် ဗျာ။ ပိုက် ဘော မိ တယ် ဆို တာ
လူ အတွက် ရော ၊ နာ မည် အတွက် ပါ ဆိုး လွန်း ပါ တယ် ခင် ဗျာ ။
အခု လောလောဆယ် က တော့ ငွေ လှည့် နိုင်တဲ့ ၊ စတိုးဆိုင် တို့ ၊ အရောင်း အဝယ်
အသေး လေး တွေ အဆင်ပြေ ပါ တယ်၊ လောဘ ဇော ၊ တော့ သိပ် မထားကြ ပါ နဲ့ ဗျာ
ဈေးကောင်း ရင် စဉ်းစား မနေ ပါ နဲ့ ၊ ရောင်း သာ ရောင်း လိုက် ပါ။
ဈေး ကျ တာ တွေ့ ရင် စဉ်းစား မနေ ပါ နဲ့ ၊ ဝယ် သာ ထား လိုက် ပါ။
တက်ပြီး ကျစ အချိန် မှာ ရောင်း တာ မှန် ရင် ၊ ကျပြီး တက်စ အချိန် မှာ ဝယ် တာ မှန် ရင်
အကျိုး များ ပါ တယ် ခင် ဗျာ ၊ သူများ နောက် မှ တော့ ၊ မ ယောင် ပါ နဲ့ တော့ ခင်ဗျာ။
ငြိမ် ငြိမ် နေ တာ က ၊ အကျိုး ယုတ် စရာ မရှိ ပါ ခင် ဗျာ။
နောက် ခြောက်လ လောက် အထိ က တော့ မိုးလေဝသဆရာကြီး ဦးထွန်းလွင်ပြောသလိုပါဘဲ။
စီးပွားရေး လာနီညာ က ရှိမြဲ ရှိ နေ ဦး မှာ ပါ။ ဖောက်ပြန် နေဦး မှာ ပါ ။
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် မှာ တိမ်တိုက် တွေ ဖောက်ပြန် မှု ရှိ မရှိ ကို မျော်ကြည့် ရ သလိုပါဘဲ
အစိုးရသစ် က ဘာ ဆက် လုပ် မလဲ ဆို တာ ကို တော့ ၊ မျက် ခြေ မပြတ် ၊ ကြည့် နေ ပြီး ၊
ချက် ချင်း ၊ သဘော ပေါက် ဘို့ လို ပါ တယ် ခင် ဗျာ ၊
မြန်မာပြည်သူပြည်သား အားလုံး စီးပွားရေး ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုဘေး က အစဉ်ကင်းဝေး
နိုင်ကြပါစေ ခင်ဗျာ ၊ နေချည်ဖြာတိုင်း နွေးကြပါစေ ၊ ရေ ကြည် ရွာ တိုင်း အေး နိုင် ကြပါစေ
ပျိုး မှန် ၊ မိုး မှန် ၊ လေ မှန် နဲ့ သာယာဝပြောပြီး ၊ လုပ် သ မျှ စီးပွားရေး အခွင့် အလမ်း
အစဉ် ပွင့် လမ်း အောင် မြင် နိုင် ကြ ပါ စေ ဗျား ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/13/20110အကြံပြုခြင်း
(၂) ဒီပဲယင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကား မောင်းနှင်သူ ကိုကျော်စိုးလင်း
(၁) ဒီပဲယင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကား မောင်းနှင်သူ ကိုကျော်စိုးလင်း
&lt;p&gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt; &amp;amp;lt;/span&amp;amp;gt;&lt;/p&gt;
Min Aung Hlaing's Orders
57789680 MinAungHlaing Order Regional Commanders of Karen Kachin Shan to Atttack Ethnics Military Council i...
57790433 MAH MyathHein ShweMann Rpt to NPT on Difficulty if Continue This Way Attacking Ethncis Will Close ...
ထာဝရ နှင်းဆီ ( သို့မဟုတ်) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့ဖခင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းထက် နှစ်ဆသာသွားပြီ …ဟုတ်တယ်…..နှစ်ဆသာသွားပြီ
ဗိုလ်ချုပ်ကျဆုံးသွားတော့ သူ့အသက်က ၃၃ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လေ ၊ အခု အန်တီစု အသက်က ၆၆ ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်ထက်တော့လူ့ဘ၀မှာနှစ်ဆနေခွင့်ရသွားပြီ..(နေခွင့်ရသွားပြီလို့ပြောလိုက် တာက နေခွင့်မရအောင်ကြိုးစားတဲ့သူတွေရှိလို့ပါ )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ အသံကြားရင် ဒေါသတွေမွှန်လာတတ်တဲ့ န.၀.တ အတွင်းရေးမူး ( ၂ ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်ဦး
သူတို့တတွေ…….သူတို့တတွေ ငရဲပြည်မှာဆုံစည်းနေကြရင်….တကမ္ဘာလုံးမှာ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ကျင်းပတော့မဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ပွဲကို ကြည့်ရင်း ဒေါသတွေနဲ့ ကျိန်ဆဲနေရှာရော့မယ်……
“တို့တွေကသူ့ကိုမသေသေအောင်သတ်တာ….သူကမသေဘူး…..ငါတို့ကအရင်သေကုန်ကြတယ်….. အောင်မာ…၆၆ နှစ် မွေးနေ့ပွဲတောင် ကျင်းပနေပါ့လား….တောက် ”
မကျယ့်တကျယ်နဲ့ နေနေရတဲ့….ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည် တို့…..ကျော်ဘ တို့လိုလူတွေ
ထောင်ထဲမနေရယုံတမယ် နေနေရတဲ့ ……မာယာများတတ်တဲ့…..ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်လိုလူတွေ
နေပြည်တော်ဆိုတဲ့အရပ်ဒေသရဲ့…..လုံခြုံရေးအစောင့်ရှောက်များ(နောက်များမကြာမှီသူတို့တတွေ ဟာ ထောင်ဝန်ထမ်း အစောင့်များလည်း ဖြစ်လာကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါသည် )ကြားက စံနန်းတော်ကြီး ပေါ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီးဟောင်း သန်းရွှေ ကတော့……..ဖြစ်ပျက် တရားကိုရှုရင်း…….
ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အရာတွေဟာ ပျက်တော့မှာ ပါ့လား….ဆိုတဲ့ သံဝေဃ လေသံအပြည့်နဲ့ မြည်တွန် နေဆဲ……အာရုံ ထဲမှာ သူ့လူတွေက သူ့ကို အာဏာဖီဆန် တော့မဲ့ နိမိတ်ပုံရိပ်….သူသတ်ခဲ့တဲ့ သံဃာင်္တွေ ရဲ့ခြောက်လှန့်နေမူ့များကြားက………အော်….မစုတောင်…..၆၆နှစ်ပြည့်ပြီပဲ….ငါတို့လည်းနေ၀င်ချိန်နီးပါပေါ့..ဆိုပြီးသင်ခန်းစာတွေရနေမလား…….အတိုက်အခံဆိုလက်ညှိုးထိုးကောင်ယုံလောက်ထား..ကျန်တာရှင်း..တလက်မ မှတက်မလာစေနဲ့ဆို….ဒေါသစိတ်တွေနဲ့ ကန်လန့်ကာနောက်ကွယ်က မုန်ယိုနေမလား
ကျနော် ၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်နေတော့ ( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ပေါ်ထွက်မလာသေးဘူး ) စိတ်ထဲမှာခွန်အားတခုဖြစ်မိတာရှိတယ်………မြန်မာပြည်လူထုအရေးတော်ပုံကြီးကိုဦးဆောင်ဘို့အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသား အောင်ဆန်းဦး ရောက်လာတော့မယ်တဲ့ ကျနော်တို့ ၀မ်းသာမိခဲ့တာအမှန်ပါ…..ဒါပေမဲ့ဒါတွေဟာကောလဟာလတွေဖြစ်ပြီးသမိုင်းကိုပြောင်းပြန်ဖန်တီးသူဖြစ်သွား တယ်ဆိုတာ နောက်ထပ် ဆယ်နှစ်လောက်အကြာမှာသိလိုက်ရပါတော့တယ်။ တကယ်တော့ မြန်မာ လူထုတော်တော်များများကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသိပ်မျှော်တွေးမထားမိကြဘူး။အရင်ဆုံးမျှော်လင့်ခဲ့မိသူက အကိုဖြစ်သူ…ဦးအောင်ဆန်းဦး………….
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုဖြစ်တည်လာခဲ့မူ့မှာ…ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အရိပ်ပါ ပါတယ်…ဒါပေမဲ့ လုံးလုံးလျားလျားကြီးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး…….
သတ္တိတွေ၊ရိုးသားမူ့တွေ၊အနစ်နာခံမူ့တွေမရှိခဲ့ရင်…….လူထုခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာနိုင်ပါ့မလား…. ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရင်သွေးမို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလူထုကချစ်မြတ်နိုးလေးစားကြည်ညိုနေတယ်ဆိုရင်……သားကြီး ဦးအောင်ဆန်းဦးကိုရော လူထုက ဒီလိုသဘောထား တထပ်တည်းရှိပါသလား………
တမျိုးက…ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုင်းပြည်အတွက်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့လည်းတဲ့………ဘာမှလုပ်ခွင့်မရအောင်လုပ်ထားမှတော့….တိုင်းပြည်ကို ချစ်တဲ့စိတ်….အနစ်နာခံမူ့တွေကလွဲလို့ဘာလုပ်ပြနိုင်မှာလည်း…………ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားပြီးမှသီချင်းလည်းမဆိုဘူး ဆိုတာမျိုးလား……….မျက်စိဖွင့်ပြီး အိပ်ကြည့်စမ်းပါ ဆိုတဲ့ သီချင်းလိုလား………
- သူလုပ်ပြပါလိမ့်မယ် ….. ကျနော်ပြောရဲတယ်ဗျာ….သူတကယ်လုပ်ပြပါလိမ့်မယ်……….
ဒါပေမဲ့……အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဂျော့ဝါရှင်တန်ကတော့ပြောခဲ့ဘူးတယ်…..စနစ်တခုကို ကူးပြောင်းဘို့တော်လှန်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ အင်မတန်မှ ခက်ခဲပါတယ်…….ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အဲဒီ့ စနစ်ကို အောင်မြင်စွာတည်ဆောက်နိုင်ဘို့ အခွင့်အလမ်းတွေ သင့်ဆီကိုရောက်လာခဲ့ရင်……သင့်ရဲ့ သားစဉ်မြေးဆက် အမွေဆက်ခံနိုင်မှာမို့ပါတဲ့…….
13 Jun 2011 Yeyintnge's Diary.doc
2856K View Download
13 Jun 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
3548K View Download
13 Jun 2011 Yeyintnge's Diary
ဒီမိုကရေစီနှင့် တိုးတက်မှုအတွက် ဒိုင်းနမစ် မဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယအစိုးရ
Sunday, 12 June 2011 01:01 မောက္ခ နိုင်ငံတကာသတင်း
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့တော်ရဲ့ တောင်ဘက် ၁၅ မိုင်အကွာရှိ ဂူဂါဝန်မြို့တွင် ရှော့ပင်းမောလ်ကြီး ၂၆ ခုနှင့် ဂေါက်ကွင်း ၇ ကွင်း ရှိသည်။ ပြင်သစ်နှင့် အီတလီလုပ် ဈေးကြီးကြီး
သားရေအိတ် မျိုးစုံရောင်းတဲ့ ဇိမ်ခံပစ္စည်း ဆိုင်တွေ၊ ဖက်ရှင်ဆိုင်တွေ ရှိသည်။ မာစီးဒီး-ဘန့်ဇ်နှင့် ဘီအမ်ဒဗယူ ကားအရောင်းဆိုင်တွေ ရှိသည်။ ဆိုက်ဘာစီးတီး အိမ်ယာတွေနှင့် မိုးမျှော်တာဝါ တိုက်တွေကလည်း ထိုးထိုးထောင်ထောင်။ ကမ္ဘာကျော် ကော်ပိုရေးရှင်းတွေ စုဆုံရာ စီးပွားရေး ဗဟိုချက် ဖြစ်ဖို့လည်း အရှိန်ယူနေသည်။
ဂူဂါဝန် တွင် အရာရာဖြစ်လာတော့မည့်ပုံနှယ်။ သိှု့သော် လုံးဝ ပစ်ထားတွေလည်း ရှိသည်။ မြို့အနှံ စီးဆင်းတဲ့ ရေဆိုးမြောင်းစနစ် ဖြစ်သည်။ မိုးရွာရင် လမ်းတွေပေါ် ရေပုပ်တွေ လွှမ်းသွားပြီး၊ မိလ္လာထုပ်တွေ မျောလာသည်။ လမ်းဘေး အမှိုက်ပုံ ချဉ်စူးစူး အနံတွေက ပျို့တက်စေသည်။ လျှပ်စစ်မီးက ခဏခဏ ပျက်။ သောက်သုံးရေက ခွဲတမ်းနှင့်။ ကချော်ကချွတ် လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းတွေပေါ် နေ့စဉ်တိုးကြိတ်ရင်း ပြဲကွဲသူတွေ များလာသည်။ မီးပွိုင့်တွေက ဖောက်ပြန်သမို့ ကားသမားတွေက အော်ဟစ်ဆဲဆိုရင်း မောင်းချင်သလို မောင်းသည်။ ဘတ်စကားတွေထဲ ယောက်ျား မိန်းမ လုံးကြပ်နေသည်။
အဲဒီ ၀င်းလဲ့ပြိုးပြောင် အဆောက်အဦများနဲ့အတူ စီးပွားရေး ကဆုန်ပေါက်နေတဲ့ ဂူဂါဝန်မြို့သည် ‘အိန္ဒိယသစ်’ ရဲ့ သင်္ကေတကို ၀င့်ကြွားဖော်ပြနေသည်။ အခြေခံ အဆောက်အအုံတွေ (infrastructure)၊ ပြည်သူ့ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ (public services) လုံးဝ ချို့တဲ့ကင်းမဲ့စွာဖြင့် နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးအင်ဂျင် မြို့သစ် ဖြစ်လာအောင် တည်ဆောက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ အစိုးရ ဌာနတွင်း လဘ်စားမှုများ၊ ရေသာခိုမှုများ၊ ကြိုးနီစနစ်များနှင့်အတူ ဂျီဒီပီ ကိန်းဂဏန်းနှစ်ခုရအောင် ကြိုးစားနေတဲ့ အိန္ဒိယရဲ့ တိုးတက်မှုမြင်ကွင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ဂူဂါဝန်မြို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိန္ဒိယရဲ့ ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ် စီးပွားရေး တိုးတက်မှုက လူထုရဲ့ လုပ်အားနှင့် လာနေတာ ဖြစ်သည်။ အစိုးရကြောင့်ဟု ပြောဖို့ခက်နေသည်။ အိန္ဒိယနှင့် တရုတ် နှစ်နိုင်ငံစလုံးက ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး အင်အားကြီးဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြသည်။ တရုတ်စီးပွားရေး တိုးတက်မှုကို အစိုးရကြောင့်ဟု ပြောလျှင်၊ အိန္ဒိယ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို အစိုးရက ဟန့်တားနေသည်ဟုပင် ဆိုရမည်။
တရုတ် အာဏာရှင်များက စီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ အဆင့်မှီ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ (infrastructure) ဆောက်နေချိန်တွင်၊ အိန္ဒိယ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရက ဗျူရိုကရေစီနှင့် အရန်ဆောက်အအုံ စနစ်များကို ၁၈ ရာစုကအတိုင်း ဘာမှမပြောင်း။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွင် အိန္ဒိယက ကမ္ဘာ့ တိုးတက်မှုအရှိဆုံး စီးပွားရေး အင်ဂျင်တစ်လုံး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခု ဂလိုဘယ် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့် အတိုးနှုန်းမြင့်မှု ဖိအားကို ကြုံလာရတာတောင်မှ၊ နောက် ၁၅ နှစ်အတွင်း အိန္ဒိယကို ကမ္ဘာ့တတိယ စီးပွားရေး အင်အားအကြီးဆုံး ဖြစ်လာဖို့ ပညာရှင်များက ခန့်မှန်းနေကြသည်။ တရုတ်ရဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု အရှိန်နေရာကို ၀င်ယူနိုင်သည်ဟုလည်း တွက်ကြသည်။
ခက်တာက အစိုးရဖြစ်သည်။ ၀န်ကြီးချုပ် မန်မိုဟန်ဆင်း အစိုးရသည် ရှင်သန်နိုးကြွမှု မရှိ။ မစ္စတာ ဆင်း ကိုယ်တိုင်က အစိုးရအဖွဲ့ထဲ ဘာဖြစ်နေနေ၊ ဘယ်သူဝေဖန်ဖန် ဂုရု ကျောက်ရုပ်ပုံစံနဲ့ စကားက မပွင့်တပွင့်။ နိုင်ငံရေး လုပ်မှာလား သူတော်စင် လုပ်မှာလား မပြတ်သား။ တံခါးဖွင့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံမို့ စီးပွားရေး ဒိုင်းနမစ် ဖြစ်လာပေမဲ့၊ သူ့အစိုးရ ယန္တရားက ဒိုင်းနမစ်မဖြစ်ဘဲ အကြောသေနေသည်။
ဂူဂါဝန်မြို့ မြင်ကွင်းက ဥပမာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပြင်ပနိုင်ငံများအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ Infosys ကုမ္ပဏီတို့လို outsoursing လုပ်ငန်းများရှိတဲ့ ဘန်ဂလိုမြို့ကြီးတွင် မီးပျက်လွန်းလို့ မီးစက်သံတွေ တဒိုင်းဒိုင်း။ ငွေကြေးဈေးကွက်မြို့ မွမ်ဘိုင်းမှ အဆောက်အဦ အခန်းများတွင်လည်း ရေမရလို့ ရေစည် အထမ်းသမားများ ဆူညံနေသည်။ မြို့ပြနေ မိသားစု တစ်ဝက်ကျော်က သူ့တို့ကလေးတွေကို အစိုးရကျောင်းများ ညံ့ဖျင်းလို့ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများသာ ပို့ကြသည်။
လူဦးရေ ၁.၂ ဘီလီယံရှိ အိန္ဒိယသည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများကြားတွင် အကြီးဆုံး ဒီမိုကရေစီ စမ်းသပ်ခန်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဘီလျံနာ မီလျံနာ များစွာ ပေါ်ထွက်လာမှုနှင့်အတူ လူတန်းစား မညီမျှမှု၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ အဟာရ ချို့တဲ့မှု၊ ရောဂါဘယထူပြောမှု၊ ကူးစက်ရောဂါ ပျံ့ပွားမှု အမြင့်မားဆုံးဖြစ်နေသည့် တိုင်းပြည်ကြီး ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုဝင်များ၏ ညီညွတ်မှုပြသ
Posted by admin on June 13, 2011 1 Comment
ကိုပြုံးချို ရဲ့ ဇနီးမှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆုတောင်းနေစဉ်
ရန်ကုန်မြို့၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်
မကြာသေးမီကမှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားများနှင့် အကျဉ်းကျခံနေရသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားမိသားစု များ တွေ့ဆုံပွဲလေးတခုကို အကျဉ်းကျခံနေရသော ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ကိုပဏ္ဍိတ်ထွန်း နေအိမ်တွင် ယနေ့ နေ့လည် ၁း၀၀ နာရီတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ထိုပွဲသို့ အကျဉ်းကျခံနေရသော “၈၈” မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည့် ကိုမင်းကိုနိုင်၏အမ၊ ကိုမြ အေး၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုဇော်သက်ထွေးတို့၏ ဇနီးများ၊ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မှ မဖြိုးဖြိုး အောင် ၏ ဖခင်၊ ကိုဒီငြိမ်းလင်း၊ ကိုရှိန်းရာဇာထွန်းတို့၏ မိခင်များ၊ ကိုနေဖုန်းလတ်၏ မိဘနှစ်ပါးတို့အပြင် တခြား နိုင်ငံ ရေး အကျဉ်းသား မိသားစုဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် “၈၈”မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၊ အန်အယ် (လ်)ဒီ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ပြည်သူများလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးအတွက် ဥပဒေကြောင်းအရ ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နိုင်ရန်၊ နိုင် ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုဝင် အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ဝိုင်ဝန်းကူညီနိုိုင်ရန်နှင့် အကျဉ်းကျခံနေရသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ၏ မိသားစုဝင်များသည် တသွေးထဲ တသားထဲ ရှိနေကြောင်းတို့ကို ပြသနိုင်ရေး ရည်ရွယ်ချက်တို့ဖြင့် ထိုတွေ့ဆုံပွဲလေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
ယနေ့ ပြုလုပ်ခဲ့သော တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများက သူတို့ ခံစားခဲ့ရ သည့် ထောင်အတွေ့အကြုံများကို ပြန်လည် ပြောပြခြင်း၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုဝင်များက သူတို့၏ ခံစားချက် များကို ပြောကြားကြခြင်းနှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆုတောင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ညနေ ၄း၀၀ နာရီတွင် တွေ့ဆုံပွဲ ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ မွေးနေ့ တွေ ကို.. ကျမ တို့ အားလုံး .. သတိတရ ကျင်းပ နေ ခဲ့ ကြတာ...မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ ကြီး ရဲ့ အသက် နဲ့ အမျှ ပေါ့..။ အခု ဆိုရင်.. ၂၃ နှစ် တိုင်တိုင် ရှိ ခဲ့ ပြီ။ လွန်ခဲ့ တဲ့ ၂ နှစ်.. ၂၀၀၉ ခုနှစ်က တော့...လန်ဒန်ကို ခရီး တထောက် အလည် ရောက်တုန်း.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ၆၄ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ နဲ့ ဒေါ်စု ထူထောင် ထားတဲ့ Prospect Burma အဖွဲ့ ရဲ့ နှစ် ၂၀ ပြည့် ရံပုံငွေပွဲလေး ကို... ကြုံကြုံ ကြိုက်ကြိုက်..ဆုံခဲ့ ရပါတယ်။
တကယ်တော့..အဲဒီပွဲလေးကို တက်နိုင်ဖို့.. လန်ဒန်မြို့မှာ နေထိုင် စာတမ်းပြုစု နေ တဲ့.. ညီမငယ် သရဖီ က တဆင့်.. ဆက်သွယ် သိရှိပြီး.. လက်မှတ် ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အခု.. မိုးမခ မီဒီယာ ကနေ.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ၆၆ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အတွက်.. စာမူ တွေ ဖိတ်ခေါ် တဲ့ အခါ.. အဲဒီ အချိန်က. ခံစားချက်နဲ့ ရေးခဲ့ ဖူးတဲ့.. “မွေးနေ့ ၆၄” ဆို တဲ့.. ဘလော့ဂ် စာစု လေး ကို.. “မွေးနေ့ ၆၆” အဖြစ် ပြန်လည်ပြီး အမှတ်ရ ဖြစ် ပြန်ပါတယ်။ မွေးနေ့ နောက်က.. ကိန်းဂဏန်း တွေ သာ ပြောင်းလဲ သွားပေမဲ့.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့.. အကြောင်း တွေက တော့... မဟောင်းနွမ်း သွားလေဘူး ဆိုတော့...
ဇွန် ၁၇ ရက်နေ့ ညနေခင်း.. အဲဒီ ပွဲမှာ..ကိုယ် တွေ့ဖူးချင်သူတွေကို တွေ့လိုက် ရသလို.. မိတ်ဟောင်း ဆွေဟောင်း တချို့လည်း တွေ့လိုက်ရတော့..နွေးထွေး လိုက် တဲ့ ဖြစ်ခြင်း..၀မ်းသာ လိုက်တဲ့ ဖြစ်ခြင်း။ မကျဉ်းမကျယ် ခန်းမငယ်လေး ထဲမှာ.. ရံပုံငွေ လေလံတင်မဲ့.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုံ ပန်းချီကားတချို့..ဗမာ့ အနုပညာ ပစ္စည်း တချို့ နဲ့ မြန်မာရနံ့ ခပ်ပျံ့ပျံ့ တော့ ရှိနေခဲ့တယ်။
တိုင်းရင်းသား ရိုးရာ ၀တ်စုံ ၀တ်လာကြတဲ့.. Prospect Burma ဆုရ..မြန်မာ ကျောင်းသားဟောင်း - သစ် တချို့တလေ ကြားမှာ..ကိုယ်လည်း..ဗမာလုံခြည် တထည် ၀တ်ပြီး.. ရော ယောင် ပျော် နေမိတယ်။ အများစု ကတော့.. ရံပုံငွေ ဦးတည်ရာ..အင်္ဂလိပ် လူမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်း တချို့ နဲ့.. အထူးဧည့်သည်တော်.. အင်္ဂလိပ် မင်းသမီး Joanna Lumley ။ နောက်ပြီး.. လန်ဒန် ရောက် ဗမာ မိသားစု တချို့… မြန်မာ အဆက်အသွယ် ..အင်္ဂလိပ်လူမျိုး တချို့.. အဲဒီ အထဲကမှ.. Prospect Burma ရဲ့ တာဝန်ရှိသူများ ..။ ဒါတွေ နဲ့တင်..ခန်းမလေး ထဲမှာ..လူတွေ ဟို သွား ဒီရွှေ့ ဖို့ တောင် မလွယ် အောင် ပြည့် ကျပ်နေပြီ။
၀ိုင်ခွက်လေး တွေ..ဖျော်ရည်ခွက်လေးတွေ ကိုယ်စီ ကိုင်ရင်း.. မိတ်ဆွေဖွဲ့ကြ.. အဘိယါစကါ စကား ပြောကြ ရင်း.... မြန်မာအမျိုးသမီး တယောက် ရဲ့ ရင်ထိုး ကဒ်ပြား ပေါ်က Prospect Burma Trustee ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ..ဒေါ်ကြည်ကြည်မေ လို့ နံမယ်ထိုးထား တာ တွေ့လိုက်တော့..၀မ်းသာအားရ မိတ်ဆက် ဖြစ်တယ်။ မီဒီယာ ကြားခံ ရှားပါး လှတဲ့.. ကိုယ်တို့ ငယ်ငယ်..လေ့လာ စူးစမ်း သိမြင် ချင် တဲ့ အရွယ် တလျှောက်လုံးမှာ.. သောကြာနေ့ ည တိုင်း..ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်မှာ..စောင့်ပြီး နားထောင် ရင်းနှီးခဲ့ ရတဲ့..ငွေဗျိုင်းဖြူ ဒေါ်လေး ဒေါ်ကြည်ကြည်မေ ပေါ့…။ ထင်ထားသလောက် မကြီးသေး တဲ့ ဒေါ်လေးက တော့..သူ့ ပရိသတ် ဖြစ်ခဲ့ ဖူးတဲ့ ကောင်မလေး တယောက် ရဲ့.. မီးခိုးရောင် ဆံစ တချို့ကို ကြည့်ပြီး အံ့သြ နေပုံ ပေါ် ရဲ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် လောက်က.. ဒေါ်လေး ရဲ့ အစီအစဉ် အတော်များများကို ပြန်ပြောပြ နိုင် နေတဲ့.. ကိုယ့်ကို ကြည့်ပြီး..ဒေါ်လေး က ၀မ်းသာနေတယ်။ စကားတွေ ပြောနေရင်း..အနားမှာ အတူ ရှိ နေတဲ့ Anthony Aris ကို “ အဲဒီ အချိန်က ငါတို့ လူငယ်တွေကို ….ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပေးတာ သူပဲ ပေါ့ ” လို့ ပြောလိုက်တော့..ဒေါ်လေး အပြုံးက..ပို လင်းသွားတယ်။ တကယ်လည်း..အဲဒီ အချိန်တွေ တုန်းက..ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရဲ့ သမီးအကြောင်း ပထမဆုံးအကြိမ်..ငွေဗျိုင်းဖြူ ကဏ္ဍ ကနေ..စ ကြားဖူးတာပါ။ ၁၀ မိနစ်စာ လောက်.. စကားပြောခန်းလေး ကို မျက်လုံးတွေပြူးကျယ် နေအောင် ရေဒီယိုလေးနားမှာ.. ခေါင်းတွေ ဆိုင်ပီး..နားထောင်ခဲ့ ရတာ..ခုထိ မမေ့သေးပါဘူး။
ခုဆိုရင်..စု ဟာ.. နံမယ်ဆိုး နဲ့ ကျော်ကြားလှ တဲ့ အင်းစိန်ထောင် တနေရာမှာ ရှိနေပါတယ် လို့ ပြောလိုက်တော့.. မျက်ရည်ကို မထိန်းနိုင် တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့.. စု အတွက်တော့..နှစ်ပေါင်းများစွာ ငေးမော ငြီးငွေ့ စရာကောင်းတဲ့..အင်းလျားကန် မြင်ကွင်း ကနေ.. စိတ်လှုပ်ရှားစရာ..မြင်ကွင်း အပြောင်းအလဲ တခု ဆီ ကို ရောက်သွားတဲ့ အတွက်..တမျိုးတော့ ကောင်းသွား ပါတယ် ..လို့ ခပ်ရွှန်းရွှန်း ပြောလိုက် ပေမဲ့.. ဘယ်သူမှ မပြုံးနိုင် ကြပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်လေ.. ဒါဟာ..အပြောင်းအလဲ တခု ဆီကို ပို နီးကပ်လာတဲ့..အပြောင်းအလဲ တခုပါပဲ..။ ပိုကောင်းတဲ့ ..အကောင်းဆုံး ဆိုတဲ့ အပြောင်း အလဲ သာ ဖြစ်ပါစေ..လို့ တွေးရင်း..မျက်ရည်တွေကို လက်ဖနောင့် နဲ့ ပွတ်သုတ်ပြစ် လိုက်တယ်။ ပွဲ ပြီးကာနီးမှာ.. Anthony အနားကို သွားပြီး..နှုတ်ဆက် စကား ဆိုရင်း.. မနက်ဖန်..ငါတို့ အောက်စဖို့ဒ် ကို သွားပြီး..စု နေခဲ့တဲ့ အိမ်ကို သွားကြည့်မယ်လို့..ပြောတော့..ပခုံးကို သိုင်းဖက်လိုက်ရင်း.. ဒေါက်တာ မိုက်ကယ် အဲရစ် မျက်လုံးတွေ နဲ့ တထေရာ တည်း တူလွန်း တဲ့…သူ့ မျက်လုံးတွေက.. ကြင်နာဟန် အပြည့် နဲ့ မျက်ရည်တွေ ၀ိုင်းနေသလို ပါ ပဲ။
ဒေါ်စု မွေးနေ့ မတိုင်ခင် တရက်မှာ..ဒေါ်စု နေထိုင် ခဲ့တဲ့..အောက်စဖို့ဒ် ဆိုတဲ့ မြို့နေရာလေးကို သွားလည် ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့.. တိုက်ဆိုင် ကြုံကြိုက်မူ တခုကြောင့်..ရင်တွေ တအားခုန်နေမိသည်။ ဒေါ်စု ပြောခဲ့တဲ့.. grey, damp Oxford ဆိုတဲ့ နေရာလေးကို တကယ် ရောက်ပါ ပြီ။ တကယ့်ကို .. ပျားရည်ရောင် အလယ်ခေတ် လက်ကျန် ပုံစံ အဆေက်အဦ ဟောင်း ကြီး တွေ နဲ့ ခန့်ညား အုံ့ဆိုင်း နေတဲ့.. မီးခိုးရောင် တက္ကသိုလ် မြို့လေးပါပဲ။
လူ ၃ ယောက်ထဲ နဲ့ စဖွင့်ခဲ့ပြီး..ခုတော့.. စာအုပ်တန်းကြီး က..မိုင်ပေါင်းများစွာတောင် ရှည်လျားလှပါတယ် ဆိုတဲ့..ရှေးအကျဆုံး..နံမယ် အကြီးဆုံး ဟောဒီ Blackwell စာအုပ်ဆိုင်ကြီးထဲကိုလည်း..ဒေါ်စု ခဏ ခဏ ရောက်လာမှာပဲ။ ဟော ဟိုက..ကော်ဖီ ဆိုင်လေးမှာရော..သူတို့ မိသားစု ဘယ်နှယ်ခါ လောက်များ ထိုင်ဖူးကြ မလဲ..။ သူ့ အတွက်..သာတောင့် သာယာ ရှိလှတဲ့.. ဘ၀ တခု ကို..သူဘာအတွက် ကြောင့်..ဘာနဲ့ အစားထိုးခဲ့တာလဲ.. ကြည့်စမ်း..ခုချိန်ဆို..သူ ဘာတွေ လုပ်နေမလဲ...။ အတွေးတွေ နဲ့ တင်.. အောက်စဖို့ဒ် မြို့လေး က..ပိုပြီး မှိုင်းမှုံ လာသလိုလို..။
- ဟော- တွေ့လေပြီ။
လမ်းညွှန် လိုက်တဲ့ သူကလည်း အသေအချာကို ပြောလိုက်တာ.. အဲဒီ လမ်းလေး ထဲ ၀င်သွား..နံပတ် ၁၅ တဲ့။ သူက..အလယ်ခေါင်က.. ပန်းခြံ ၀ိုင်းဝိုင်းလေးကို ဟိုဖက် ဒီဖက် ၀ိုက်ပြီး..တိုက်ခန်းတွဲ ကြီးတွေ ဆောက်ထားတာ။ အိမ်ရှေ့တွေမှာလည်း ကားတွေ တန်းစီ နေတာပဲ..။ လူတွေ နေနေကြတာ ဆိုတော့.. အရမ်းကာရော.. သွားကြည့် လို့လည်း မဖြစ်။ နံပတ် ၁၃.. ဟော..ဟိုဖက်က..၁၅.. တွေ့ ပြီ။ ထူးထူးခြားခြား..အိမ်နံပတ် ၁၅ ရှေ့မှာပဲ.. တိုက်ကပ်နွယ် တွေ မတရား ဖုံးနေ လိုက်တာ.. ၁၅ ဆိုတဲ့ နံပတ်ကို တောင် မနဲ မြင်အောင် ကြည့် ရတယ်။ ဒီ အခန်းလေးကို တခြားလူတွေကို ရောင်းသွားခဲ့ပြီ ဆိုတော့..အထဲမှာ လူသစ်တွေ ရှိနေမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့..သူတို့လည်း သိချင် သိမှာပါလေ.. အာရှသား ရုပ်တွေနဲ့..ခဏခဏ လာကြည့် ကြ..ဓါတ်ပုံ ရိုက်ကြ လုပ်နေကြတာ..သတိထားမိနေမှာပါ။
လမ်းထိပ်က..ပန်းခြံ ဘောင်လေး ပေါ်မှာ ခဏ ထိုင်ရင်း..ခပ်ဝေးဝေးက နေ ငေးကြည့် မိပြန်တယ်။ ဒီလို လွမ်းစရာ ကောင်းတဲ့ ညနေစောင်းလေး တွေမှာ.. မီးခိုးရောင် မြို့လေး ထဲမှာ..ဒေါ်စု ဘာတွေ လုပ်နေ ခဲ့လေ မလဲ.. ။ နေသာတဲ့ မနက်ခင်း အတော်များများ မှာ တော့..ဟောဒီ ပန်းခြံ လေး ထဲ.. ကလေး လက်တွန်းလှည်း လေး တွန်းပြီး တော့လည်း သွားခဲ့ဖူးမှာပဲနော်..။ ခုတော့..အသက် ၆၄ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီး တယောက် ရဲ့ ညနေခင်း နဲ့ မနက်ခင်းတွေမှာ ..လုပ်စရာ သိပ် များများ စားစား ..ရွေးချယ် စရာ ရှိမနေလောက်ပါဘူး။ အချိန် တွေ..အသက်တွေ.. ရွှေ့ လျော သွား သလို.. ဌါန ဌါနေ တွေ ကလည်း...အပြောင်းလဲ ကြီး ပြောင်းလဲ ခဲ့ ပြီပဲ....။ အိမ်နံပါတ် ၁၅ ပါ့ခ်တောင်း မှာ နေခဲ့တဲ့.. စု ဟာ ..အိမ်နံပါတ် ၅၄ တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်း က.. ဗမာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြစ်နေ ခဲ့ ပြီလေ...။
၆ နာရီ ၄၅ မှာ..နောက်ဆုံး ဘတ်စ်ကား တဲ့.. ပြန်ကြမယ် ဆိုတော့မှ.. ဘာမှန်းမသိတဲ့..ခံစားချက်တွေကို အသာ မ ပြီး.. ထိုင်ရာက..ထ လိုက်တယ်။ ပြီးရင်.. Oxford ဘူတာကနေ.. Paddington ဘူတာ လန်ဒန် မြို့ထဲထိ..နောက်ထပ် တနာရီလောက် ရထား စီးရ အုံးမှာ…။ မနက်ဖြန် မနက် လည်း..စောစော ထပြီး.. ၉ နာရီ လေဆိပ်ဆင်းဖို့ ထုပ်ပိုး ပြင်ဆင် ရအုံးမည်။ သြော်- ခရီးတွေ.. ဘူတာတွေ..တခု ပြီး တခု ဆက်လို့.. သွားနေကြ ရတဲ့…လူတွေမှာ…ဘူတာ အချိန်တွေ တွက်ချက် စီစဉ်ထားလို့ မဖြစ်တဲ့..ရထား လတ်မှတ်တွေ ကြိုတင် ၀ယ်ယူထားလို့ မရတဲ့..ဘ၀ ခရီး ရှည် ကြီးကသာ.... စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကောင်းဆုံး မဟုတ်လား … ။
တနင်္ဂနွေ, 12 ဇွန် 2011
ဒီတပတ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး ဆွေးနွေးခန်းမှာ ဦးသန်းလွင်ထွန်း (ဗွီအိုအေဌာနမှူး) က လတ်တလော စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် နဲ့ မြန်မာအစိုးရတပ်တွေကြား အခြေအနေ၊ အကြောင်းအရာများကို သိရှိနိုင်ဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်အခြေစိုက် ကေအိုင်အေအဖွဲ့ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး နဲ့ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဗိုလ်မှူးကြီး ဂျိမ်းစ် လမ်ဒေါင် (James Lum Dau) ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဆွေးနွေးသုံးသပ် တင်ပြထားပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင် ပြောင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘောထားကွဲလွဲပြီး အခြေအနေ တင်းမာခဲ့တဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KIA) နဲ့ မြန်မာတပ်ဖွဲ့တွေကြား ကြာသပတေးနေ့ (ဇွန်လ ၉) မှာ ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဖက်သေကြေဒဏ်ရာ ရမှုတွေရှိခဲ့ပြီး သောကြာနေ့ကတော့ နှစ်ဖက်သုံ့ပန်းတွေ လဲလှယ်ပြီး စစ်ပွဲရပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ် ကတည်းက အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားခဲ့တဲ့ ကချင် (KIA) အဖွဲ့နဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ကြား သဘောတူညီချက်တွေဟာ လုံးဝပယ်ပျက်သွားပြီလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဘန်ကောက်မြို့ မှာရှိနေတဲ့ ကေအိုင်အေ အဖွဲ့ရဲ့  နိုင်ငံခြား ဆက်ဆံရေးနဲ့ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဗိုလ်မှူးကြီး ဂျိမ်းစ် လမ်ဒေါင် က အောက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုပါတယ်။
ဂျိမ်းစ် လမ်ဒေါင် ။ ။ ကျနော်တို့က အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားခဲ့တယ်။ အဲဒါ လူကြီးအချင်းချင်း တရားဝင် သဘောတူညီထားတယ်။ အဲဒီဟာကို နှစ်ယောက်စလုံး ဖျက်သိမ်းတာ မရှိသေးဘူး။ ကျနော်တို့ ချမှတ် ထားတဲ့ ရှေ့ တန်းက ရဲဘော်တွေကို ချမှတ်ထားတဲ့ဟာကျတော့ အစိုးရဘက်က မပစ်လာသမျှကာလပတ်လုံး ကျနော်တို့က စမပစ်ဖို့ဆိုတဲ့ ချမှတ်ချက် ချထားပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အခုလို ကေအိုင်အို ကချင်ဖက်ကနေ ငြိမ်းချမ်းဖက်ကို လိုလားတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းဖို့ တကယ်စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း လက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေအရဆိုလို့ရှိရင် ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့ကဆိုရင် နှစ်ဖက်အပြန်အလှန် တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး လူအသေအပျောက်တွေလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကစလို့ တိုက်ပွဲတွေ (၃) ကြိမ်ထက်မနည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အလားတူပဲ မြန်မာအစိုးရ သတင်းစာတွေထဲမှာ ကေအန်အေအဖွဲ့ကို သောင်းကျန်သူအဖွဲ့အနေနဲ့ သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်လာတာတွေရှိတော့ လက်တွေ့သဘောအရတော့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဟာ ပျက်ပြားနေပြီလား။ ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် ပျက်ပြားလု နီးပါး ရှိနေပြီဆိုတဲ့အချက်ကို ဖော်ညွှန်းမနေဘူးလား။
ဂျိမ်းစ် လမ်ဒေါင် ။ ။ အဓိကအချက်ကတော့ ကျနော်တို့ထင်တယ်၊ လူကြီးတွေရဲ့  အမိန့်ကို အောက်က ရှေ့ တန်းက ရဲဘော်တွေ နားမထောင်လို့။ ဒါတွေက အုပ်ချုပ်ရေးမှာ လိုအပ်တာတွေရှိတယ်။ မနေ့မနက်က ဖြစ်ခဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲ။ သူတို့ကလာပြီး ဝိုင်းတယ်။ ဝိုင်းတဲ့အတွက် သူတို့က စပစ်တယ်။ နောက် တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်တယ်။ အခု ဒီနေ့အထိ အခုနဆရာပြောသလို အခါပေါင်းများစွာ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါတွေကတော့ ခါတိုင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာကို လူကြီးအချင်းချင်း ပြန်ပြီးဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့် ဖျန်ဖြေနိုင်တယ်။ တကယ်လို့ လူကြီးတွေသာလျှင် ရှေ့ တန်းကို တိုက်ပွဲဝင်ပါ။ ဒီလိုသာ အမိန့်ရှိခဲ့ရင်တော့ ဒီကိစ္စတခု၊ ပြဿနာတခု ပေါ်တိုင်း လူကြီးတွေဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အလားအလာမရှိဘူး။ ဒီနေ့အထိတော့ ကျနော်တို့ ဖြေရှင်းနိုင်တယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အခု နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ပြဿနာကတော့ ကျနော်တို့ ကြားရတဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင် မြန်မာစစ်တပ်အရာရှိ နှစ်ဦးအပါအဝင်၊ စစ်သားတချို့ ကို ကချင်ဘက်က ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် မြန်မာစစ်တပ်ဘက်က လာဝိုင်းတာကနေ စဖြစ်တာလို့ ကြားရပါတယ်။ အဲဒါက ဘယ်လို အကြောင်းတွေ ကြောင့် ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကို ဗိုလ်မှူးကြီးတို့ ဘယ်လောက်အထိ သတင်းတွေရပါသလဲ။
ဂျိမ်းစ် လမ်ဒေါင် ။ ။ သူတို့က ကျနော်တို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့နယ်မြေကို ဝင်လာတယ်။ ဝင်လာတဲ့အတွက် သူတို့သိပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ဝင်လို့မရဘူးဆိုတာ။ ကျနော်တို့ သူတို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကို လေးစား သလို။ သူတို့ကလည်း လေးစားရမှာပေါ့။ ဒါကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို နှစ်သက်တဲ့၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆုပ်ကိုင် ထားတဲ့ အခြေအနေ အသွင်ဆောင်တယ်။ အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲနဲ့ သူ ဝင်လာတယ်။ ဝင်လာတဲ့အတွက် ရဲဘော် တွေက မဝင်လာနဲ့ အဲဒီနေရာကနေ မဖြတ်ပါနဲ့၊ အဲဒီလို ပြောရင်းနဲ့ ဝင်လာတဲ့အခါမှာ - ဒါတွေကတော့ တဦးပေါ်တဦး သိပ်အထင်သေးတဲ့ပုံစံမျိုး ရှိတာပေါ့။ တဦးနဲ့တဦး မျက်နာဖျက်ကြတာပေါ့။ အဲဒါကြောင့် ဒါ ဘယ်နည်းနဲ့မှ တခြားရှေုာင်ရှားလို့ မရတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးမှ ဒါတွေကြောင့် အချင်းချင်း ဖမ်းကြတာပေါ့။ ဒါကတော့ သဘာဝကျပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အခုလက်ရှိ အခြေအနေအရဆိုရင် ကေအိုင်အို အဖွဲ့နဲ့ လိုင်ဇာဌာနချုပ်။ ဒေသတွင်း ဆက်ဆံရေးဆိုလို့ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့  မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာချုပ်နဲ့ ကြားမှာပဲ ဆက်ဆံရေးရှိနေပြီးတော့ အခုလောလောဆယ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကိစ္စတောင်မှ တိုင်းအဆင့်မှာပဲ တပ်မအဆင့်မှာပဲ လုပ်ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကေအိုင်အိုအဖွဲ့နဲ့ တကယ်တမ်း သမ္မတဦးသိန်းစိန် တက်လာတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကြား နေပြည်တော် နဲ့ ဆက်ဆံရေး ပြတ်တောက်နေတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ အဲဒါတွေက ဘာကြောင့် ဖြစ်နေရပါသလဲ။
ဂျိမ်းစ် လမ်ဒေါင် ။ ။ ခါတိုင်းဆက်ဆံနေတာဆိုရင် အဲဒီ မြောက်ပိုင်းတိုင်းကတဆင့် နေပြည်တော် ဘက်နဲ့ ဆက်ဆံနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကြားမှာ သူတို့ဘာသာသူတို့ မြောက်ပိုင်းတိုင်းမှာ ရောက်နေတဲ့ တပ်မတော်တွေကလည်း သူတို့စိတ်က ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်၊ သူတို့ဘာသာ strategy လုပ်နေမှာပေါ့။ အဲဒီ strategy က ဟို နေပြည်တော်က မဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပြဿနာ တွေဟာ ပေါ်နေတာက အဲဒီဒေသရဲ့  အခြေအနေဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဂျိမ်းစ် လမ်ဒေါင် ။ ။ ဒါလည်း တခုမှန်ကန်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင် ကျနော်တို့ ကေအိုင်အိုအနေနဲ့တော့ ခါတိုင်းလိုပဲ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဟာ မပျက်ပြားသေးပါဘူးဆိုတဲ့ဟာ အခိုင်အမာယုံကြည်တယ်။ တဘက်ကတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အဲဒီကြားမှာ နည်းနည်းပြက်တောက်မှု ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ လုံးလုံးလျားလျား ပြတ်တောက်ပြီလား။ ရန်ကုန်မှာလည်း ကျနော်တို့ရဲ့  ကိုယ်စားလှယ်ရုံး ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မြစ်ကြီးနား။ တော်တော်များများမှာလည်း ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ နေပြည်တော်ရဲ့  အမိန့်အရ လုပ်မယ်ဆိုရင် မြို့ မှာထားရှိတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးတွေလည်း ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အစောပိုင်းက ဗိုလ်မှူးကြီးလမ်ဒေါင် ပြောပါတယ်။ ကေအိုင်အို နဲ့ မြန်မာစစ်တပ် ကြားမှာ နဂိုတုန်းက တကယ့်ကို တရားဝင် သဘောတူညီထားတဲ့ ကတိကဝတ်တွေ ရှိတယ်ပေါ့။ ကျနော်သိရတဲ့ အချက်တွေအရဆိုရင်လည်း ၁၉၉၀ နှစ်အလယ်ပိုင်းတွေမှာ ငြိမ်းချမ်းယူခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေ ကြားထဲမှာ ကေအိုင်အိုအဖွဲ့ ကချင်အဖွဲ့တခုတည်းပဲ တရားဝင် စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အပစ်အခတ် ရပ်စဲခဲ့တာဆိုတဲ့ အချက်လည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီငြိမ်းချမ်းရေးအချက်အလက် စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ အချက်အလက်တွေထဲမှာ ဘယ်လိုအတိအကျ သဘောတူညီချက်တွေ ရှိပါသလဲ။
ဂျိမ်းစ် လမ်ဒေါင် ။ ။ ၁၉၉၄ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၄) ရက်နေ့ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီနေမှာ ကျနော်တို့ မြစ်ကြီးနား မြို့ မှာ သဘောတူညီချက် ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ အချက်တွေအများကြီး ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးတဲ့ အထဲမှာ။ ဒီမှာ အရေးကြီးဆုံးက ဘာတွေလဲဆိုရင် လက်နက်ကို ကိုင်ထားမယ်၊ ဒါပေမဲ့ တိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ အခြေအနေအရ ကာကွယ်ဖို့။ နောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ နေရာမှာ development ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်တဲ့နေရာမှာ (၃) မျိုး ရှိတယ်။ တမျိုးကတော့ အစိုးရအနေနဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်း သူ့နေရာနဲ့သူ လုပ်သွားမယ်။ နံပတ်နှစ်အနေနဲ့ ကေအိုင်အိုအနေနဲ့ သီးသန့်လုပ်မယ့် နေရာရှိတယ်။ တတိယအနေနဲ့ကတော့ တပ်မတော်နဲ့ ကေအိုင်အို ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို လုပ်မယ်။ နောက်ပြီး နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးမယ်၊ လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့က တပ်မတော် ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ နိုင်ငံရေးနဲ့ မဆွေးနွေးဘူး။ နောင်တက်လာမယ့် အစိုးရသစ်နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ ဖြစ်တယ်။ ဒါတွေကတော့ အဓိကကျတဲ့အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဒီနေရာမှာ နောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့ နောင်တက်လာမယ့် အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးမယ် ဆိုတော့ အခု သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရနဲ့ ကေအိုင်အိုကြား ဆွေးနွေးပွဲတွေ ဖြစ်မလာဘူးလား။ ဖြစ်လာဖို့ အလားအလာရှိရဲ့ လား။
ဂျိမ်းစ် လမ်ဒေါင် ။ ။ လက်တဘက်တည်းနဲ့ လက်ခုပ်တီးမယ်ဆိုရင် အသံမမြည်ဘူး။ ကျနော်တို့ကတော့ အဆင်သင့်။ သမ္မတသိန်းစိန်ကလည်း သူ့မှာ ပြဿနာအမျိုးမျိုးနဲ့ တိုင်းရေးပြည်ရေး - ကျနော်တို့ နားလည်မှု အများကြီး ပေးပါတယ်။ အဲဒီတော့က သူသာ ကြေညာတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တံခါးဖွင့်ထားပါတယ် ဆိုတာကို ကျနော်တို့က ဝမ်းသာတယ်။ ဝမ်းသာပြီးတော့ မျှော်လင့်တယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ ငါးသိန်းနီးပါးလောက် လုပ်နေတဲ့ တပ်မတော်ဟာ ဒီခေါင်းဆောင်က တယောက်သွားပြီးတော့ ပြောခြင်းအားဖြင့် ချက်ချင်းဖြစ်မလာ နိုင်ဘူးဆိုတာကို ကျနော်တို့ အပြစ်မတင်ပါဘူး။ အဲဒါ တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဂျိမ်းစ် လမ်ဒေါင် ။ ။ ဒါတွေကတော့ ကျနော်တို့ဘက်မှာ နားလည်မှုပေးထားသလို။ အစိုးရဘက်ကလည်း နားလည်မှု။ အရင်တုန်းက တပ်မတော်နဲ့ နားလည်မှုပေးလို့ မရဘူးထား။ ဒါပေမဲ့ အခု ပြည်သူလူထုတွေ ရွေးကောက်တင်မြောက်လာတဲ့ အစိုးရအနေနဲ့ဆိုရင် ပြည်သူလူထုဘက်က ရပ်တည်ပြီးတော့ သူတို့ စဉ်းစား ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဗြုန်းကနဲ ပြောင်းလဲသွားနိုင်မယ်လို့ ကျနော်ကတော့ မယုံကြည်ဘူး။ သဘာဝကျကျနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲသွားနိုင်မယ်လို့ အဲဒီလို ယုံကြည်နေပါတယ်။
ဂျိမ်းစ် လမ်ဒေါင် ။ ။ ဒါတွေကတော့ ကျနော်တို့လုပ်တာတမျိုး လူတွေက အဓိပ္ပါယ်ယူတာတမျိုး။ ဟိုတုန်းက NDF ဆိုတာ National Democratic Front ဆိုတာ ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှာ ဖွဲ့တယ်။ အဲဒါကတော့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ အစိုးရကို တိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့ကျတော့က ပြည်သူလူထုတွေ ရွေးကောက်တင်မြောက်လာတဲ့ အစိုးရ တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲဒီဟာ အချိန်ကိုက်ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနည်းအရ၊ နိုင်ငံရေးအရ သွားတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးဖို့ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါ အရင်တုန်းက တဖွဲ့စီ သွားဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ တဖွဲ့စီဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှ မရှိဘဲ။ ဒါကြောင့် ဒီနေကတော့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အားလုံးက စုရုံးပြီးတော့ အဖွဲ့တခုက အောက်က ပေါ်လစီ တခု။ အဲဒီအောက်မှာ အစိုးရနဲ့ အောင်မြင်အောင် နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးဖို့ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အဲဒီတော့ ဗိုလ်မှူးကြီးအနေနဲ့ ကေအိုင်အိုအဖွဲ့ရဲ့  ဗဟိုကော်မတီဝင်လည်းဖြစ်တော့ အခု နေပြည်တော်မှာရှိနေတဲ့ အစိုးရသစ်ရဲ့  ခေါင်းဆောင်တွေကို ဘယ်လိုအကြောင်းအရာများ အဓိကထား မေတ္တာရပ်ခံဖို့ လုပ်ချင်ပါသလဲ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဘန်ကောက်မြို့ မှာရှိတဲ့ ကေအိုင်အေအဖွဲ့ရဲ့  နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးနဲ့ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဗိုလ်မှူးကြီး ဂျိမ်းစ် လမ်ဒေါင် ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါ။
ဧရာဝတီ Monday, 13 June 2011 17:29
အမေရိကန် ဒေါ်လာနှင့် တန်ဖိုးတူ သတ်မှတ်ထားသည့် FEC ဈေးနှုန်းမှာ တယူနစ်လျှင် ၁၀၀ ကျပ်ကျော် နိမ့်ကျနေသည် (ဓာတ်ပုံ - AP)
“အထူးသဖြင့်တော့ ခရီးသွားကုမ္ပဏီတွေ၊ လေကြောင်းလိုင်းတွေ၊ ဟိုတယ်တွေ အများစုကတော့ FEC ကို လုံးဝ လက်မခံဘူး။ အစိုးရက FEC ကိုလက်ခံဖို့ ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ထားတာ ရှိတယ်။ တချို့ကတော့ FEC တ၀က်၊ ဒေါ်လာတ၀က် လက်ခံတာမျိုး ရှိတယ်။ ငွေလဲနှုန်း ပြဿနာက တော်တော်ကို တက်နေပြီ။ ဒေါ်လာရယ်၊ FEC ရယ် ဈေးကျ လွန်းတဲ့အတွက် ခရီးသွား လုပ်ငန်းတွေ အကုန်ထိတယ်” ဟု ရန်ကုန် အခြေစိုက် ခရိးသွား ဧည့်လမ်းညွှန် တဦးက ပြောသည်။
“FEC လက်မခံဘူး။ အစိမ်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ပဲ လက်ခံပါတယ်။ ငွေလဲနှုန်းကွာလို့ လက်မခံ တော့တာပါ” ဟု Park Royal Hotel ဧည့်ကြိုဌာနမှ ၀န်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
“FEC ကို အခန်းခ ရှင်းဖို့ ဒီနေ့လက်ခံပေမယ့်၊ မနက်ဖြန် လက်ခံမှာလား ဆိုတာတော့ မသိသေးပါဘူး။ လက်မခံဖို့ကတော့ များတယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပါ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
“ထူးကုမ္ပဏီမှာ FEC ကို နိုင်ငံခြားငွေကြေးအဖြစ် လက်ခံ လုပ်ပေးနေရတာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဥပမာ ဆိုရင် FEC
ဖုန်းကတ်တွေ၊ ငွေဖြည့်ကတ်တွေ ရောင်းတာမျိုးရှိတယ်၊ အဲပုဂံ လေကြောင်းလိုင်းမှာ FEC နဲ့ လက်မှတ်ဝယ်ဖို့ လက်ခံရတာမျိုး ရှိသလို တချို့ လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း FEC ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ တန်ဖိုးညီမျှတဲ့ငွေကြေး အဖြစ် လက်ခံရတာ မျိုးတွေရှိတယ်။ ထူးကုမ္ပဏီလိုမျိုး FEC ၀င်ငွေများတဲ့ တခြား ကုမ္ပဏီတွေကလည်း FEC ထုတ်ရောင်းကြတယ်” ဟု FEC နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ နှစ်မျိုးကိုသာ သီးသန့် အရောင်းအ၀ယ် လုပ်နေသူ တဦးက ရှင်းပြသည်။
“NGO၊ INGO တွေက ဝန်ထမ်းတွေ၊ ဟိုတယ်တွေ၊ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတွေမှာ လုပ်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေက FEC နဲ့ လစာရတာလေ။ ငွေလဲနှုန်း ကျလွန်းတော့ ၀င်ငွေက အတော်ကို လျော့ကုန်ကြတယ်။ အရင် ငွေလဲနှုန်းက FECတယူနစ်ကို ကျပ် ၁၀၀၀ လောက် ရှိတော့ တလကို FEC ၂၅၀ လောက် ရတဲ့သူက ကျပ် ၂ သိန်းခွဲလောက် ရတယ်။ အခုဆို ၁ သိန်း ၆ သောင်း လောက်ပဲ ရတော့တယ်။ သူတို့ ၀င်ငွေက ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ကျသွားတယ်” ဟု ရန်ကုန် Chatrium Hotel ဟိုတယ် ၀န်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
“အစိုးရက ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတာလား၊ ကျပ်ငွေတန်ဖိုး တက်တယ်ဆိုပြီး ထိုင်ကြည့်နေတာလား မဝေခွဲတတ်ဘူး။ ဒီငွေ တန်ဖိုးတက်တာက နိုင်ငံကို ဆင်းရဲမှုတွေ ဖြစ်စေမယ်။ သွင်းကုန်တွေချည်းပဲ သွင်းကုန်တဲ့ စီးပွားရေးကို ဦးတည်နေတယ်။ ဒါကို အမြန် ထိန်းဖို့လိုနေပြီ။ ဒါကိုမထိန်းရင် အားလုံးထိခိုက်နေပြီ” ဟု အဆိုပါပညာရှင်က ပြောသည်။
(၂) ဒီပဲယင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကား မောင်းနှင်သူ ကိ...
ဒီမိုကရေစီနှင့် တိုးတက်မှုအတွက် ဒိုင်းနမစ် မဖြစ်တဲ...
အိမ်နံပါတ် ၁၅ ပါ့ခ်တောင်း မှ အိမ်နံပါတ် ၅၄ တက္ကသို...